In This Article, will show the good MOTO G4 VS MOTO X 2018 (reviews), When you are choosing the mobile and you came at the market now you are thinking which one is best for us MOTO G4 VS MOTO X 2018? I Would share with all of you about this MOTO G4 VS MOTO X 2018 (reviews), with Cros and pros, doesn't matter is that, should I write the bad review. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, Lets Begin. MOTO G4: Other Country like as US, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, ယူအေအီး, ဟောင်ကောင်, သြစတြေးလျ, others this mobile price Below listed. Prices> ဆက်ဖတ်ရန် [...]
3 Best Reasons to buy iPhone 8 Plus အား
iPhone 8 plus it'sabest phone in the world I like it, and the Reasons :3Best Reasons to buy iPhone 8 Plus 1-The screen Genuine Tone is astounding. This tech is the thing that permits the iPhone to coordinate the light it produces from the screen to the encompassing light around you. So outside, in sunlight, the screen isacooler, bluer tone and inside it hasahotter tint to it. For what reason does this makeadifference? Indeed, it takes into account better on-screen hues. ဆက်ဖတ်ရန် [...]
နောက်ဆုံးရ Haier, USB Drivers Download (အားလုံးဖုန်းများအတွက်)
mujeer နိုဝင်ဘာလ 21, 20170မှတ်ချက်များ
Haier ပါကစ္စတန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ဦးဆောင်မိုဘိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်. Haier စမတ်မိုဘိုင်းသင်ဝီကီဝမ်ယနေ့ယူစေခြင်းငှါ၎င်း Haier ကုမ္ပဏီစမတ်ဖုန်းကိုအသုံးဖို့အကောင်းဆုံးကို USB driver ကိုယူလိုလား. USB ကကားမောင်းသူကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှိရမည်. လည်းမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်မိုဘိုင်းအတွက်နည်းနည်းအပြောင်းအလဲများကိုသင့်မိုဘိုင်းတိုးတက်လာဖို့ဆန္ဒရှိ Haier ကို USB Driver. You have to install Haier USB Driver, If you had to install in your mobile Haier USB Driver, WIKIWON ယခုပေးအပ်. Download Latest Haier USB Drivers I have already shared today ဆက်ဖတ်ရန် [...]
အဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်တွေက Android App ကိုထိုမေတ္တာကို Apple က iOS ကိုမုန်းတယ် Do?
mujeer နိုဝင်ဘာလ 9, 20170မှတ်ချက်များ
Why do They do? ပဌမ, of all, i can give you Why Do Americans Hate Android App And Love Apple iOS? လူမျိုးကို Android သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်သုံးစွဲဖို့ဆငျးရဲသားပုဂ္ဂိုလ်များကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခုတော့ကြောင်းပေါ်စျေးကွက် လာ. လည်းအစွမ်းထက် Apply, Apple ကစျေးကွက်ထဲမှာထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်သင့်, Market wanna take best models of new mobile but any new mobile came in the market should allow everything new setup, စဉ်ကောင်းလှ၏, နီးပါးဖွယ်ရှိ Apple က IOS ကို, အမေရိကန်တွေက Android App ကိုမုန်းတယ် Do??? Nothing new listlessly but Android is using common ဆက်ဖတ်ရန် [...]
ရုရှားနှင့်အပြည့်အဝ Specification အတွက် Jolla Jolla ကို C အပြည့်အဝဈေးနှုန်း (GB အထိ)
mujeer နိုဝင်ဘာလ 3, 20170မှတ်ချက်များ
Jolla Jolla C Released 2016, May 150g, 9.6mm thickness Sailfish 2.0 16GB အထိသိုလှောငျ, microSD card slot N/A114,604 HITS 21BECOME A FAN 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 212 2500mAh Li-Ion Full Specs NETWORK Technology GSM / HSPA / LTE LAUNCH Announced 2016, May Status Available. ဖြန့်ချိ 2016, May BODY Dimensions 142 x က 72 x က 9.6 မီလီမီတာ (5.59 x က 2.83 x က 0.38 တွင်) အလေးချိန် 150 ဆ (5.29 အောင်) SIM Dual ဆက်ဖတ်ရန် [...]
mujeer အောက်တိုဘာလ 4, 20176မှတ်ချက်များ
USB ကကားမောင်းသူပြဿနာတွေအများကြီးစဉ်းစား, installed တဲ့အခါမှာ Nokia က PC ကို suite ကိုကို USB driver ကိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. သငျသညျကို Nokia စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုလျှင်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ Windows OS ကိုပြေး PC အတွက် PC ကို suite ကို၏ဤသစ်ကိုအခမဲ့ဗားရှင်းရှိသည်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကအရမ်းကံကောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်. ဤသည်ကို Nokia PC ကို suite ကို PC မှာအလွန်လွယ်ကူစွာသင့်ရဲ့ Nokia ကဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်သင့်အားဖွင့်နိုင်ပါသည်. ဒါဟာအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Nokia ကစမတ်ဖုန်းများ၏မော်ဒယ်ကို detect နှင့်သဟဇာတကို USB driver ကိုတပ်ဆင်ပြီး. အရာပြီးနောက်သင် PC နဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်သင့်မိုဘိုင်းဒေတာထပ်တူပြုခြင်းကိုခံစားမယ် ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Android App များ, မိုဘိုင်းဖုန်း